Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in habeen dambe ay xaflad qabsan doonaan | Baydhabo Online
Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in habeen dambe ay xaflad qabsan doonaan
Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha uu waqtiga ka dhammaaday, ayaa waxaa uu kalsooni ka muujiyay in doorashada berrito ka dhaceysa Magaalada Muqdisho, uu ku soo bixi doono.
Laba iyo labaatan musharax, ayaa waxaa hadda la’ogyahay in ay u sharaxan yihiin jegada madaxtinimada dalka, waxaana Magaalada Muqdisho laga dareemay baaxadda ololaha ay ka wadaan.
Musharax Xasan Sheekh Maxamuud oo galabta Xildhibaano tiradoodu lagu sheegay laba boqol iyo labaatan xubnood, kula kulmay Hotel SYL oo kaabiga ku haya Aqalka Madaxtooyada, ayaa kaga mahadceliyay kalsooni uu sheegay in ay u muujiyeen.
“Aad iyo aad ayaan markale idinkugu mahadcelinaya kalsoonida aad ii muujiseen, ee maanta halkaan aad igu tusiseen, laakiin kalsoonidii sharciyaysneyd waa berri, haddii Alle yiraahdo.” Ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud.
Xasan Sheekh Maxamuud oo ku celiyay in uu ku kalsoon yahay taageerada Xildhibaanadan, ayaa sheegay in habeen dambe ay xaflad ku qabsan doonaan Magaalada Muqdisho.
“Waana ku kalsoonahay boqolkiiba boqol (100%) intaan meesha fadhisaayi berri kalsoonidooda oo buuxdo inay i siin doonto. Habeen dambe haddii Alle yiraahdo waan wada xafladeen doonnaa.” Ayuu yiri Madaxweynaha uu waqtiga ka dhammaaday.
Doorashada sanadkan, ayaa waxaa ugu cad cad musharaxiinta kala ah Xasan Sheekh Maxamuud, Shariif Sheekh Axmed, Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, C/qaadir Cosoble Cali iyo Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo).